Corona virus oo ku faafay Gobollada Maraykanka | Berberanews.com
Home WARARKA Corona virus oo ku faafay Gobollada Maraykanka
Corona virus oo ku faafay Gobollada Maraykanka
Maraykan-(Berberanews)- Cudurka Coronavirus ee safka ku socda ayaa gaaray dhammaan 50-ka gobol uu dalka Mareykanku ka kooban yahay, iyada oo gobolka West Vergina kiiski ugu horreeyey ee cudurka talaadadi laga helay.
Marki shaaca laga qaadayey kiiska ugu horreeyeyna Barasaabka Wes Virginia Jim Justice wuxuu yiri: “waan ogeen iney tani imaneyso.”
Magaalada New York waxaa la saaray xayiraad la mid ah midda saaran San Francisco aagga Bey.
Dalka Mareykanka ilaa iyo iyo hadda inta la xaqiijiyey waxaa laga helay 6,000 oo kiis oo cudurka Coronavirus iyada oo ay dhimashaduna gaartay 105.
Dunida oo dhan kiisaska cudurka ee la helay waaxaa lagu qayaasaa 200,000 oo kiis iyo 8,000 oo dhimasho ah.
Duqa magaalada Bill de Blasio ayaa sheeegay in la go’aamiyey muddo laba maamood ah shacabka magaalada ku nool ee lagu qayaso 8.7 milyan iney guriyahooda ka soo bixin.
Tallaabadaasi uu barasaabka ku dhawaaqay oo shacabka dhaqdhaqaaq iney sameeyaan ka xayireyso haddana waxa shacabka loo oggol yahay iney u bixi karaan soo iibsashada waxayaabaha noolashooda daruuriga u ah ee ay suuqa uga baahdaan.
“Waa go’aan aad iyo aad u adag,” ayuu yiri Mr de Blasio. “Weligeen waxaan oo kale manan maqal. Anigua weligey ma maqal wax noocan ah taariikhdi ay New york jirtay.”
Mas’uuliyiinta Sab Francisco waxay sida oo kale amar ku bixiyeen shacabka gaaraya 6.7 milyan oo qof iney guriyahooda ka soo bixin balse wixi ay u baahan yihiin ay suuqa u raadsan karaan oo keli ah ilaa iyo 7-da bisha April.
Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay aqalka cad ee Mareykanka in looga baahan yahay inuu ciidamada dalka ugu baaqo sidi ay u diyaarin lahaayeen isbitaallo degdeg ah marka looga baahdo goobaha cudurka uu ka dillaacay barasaabyada gobolladana ay ka codsadaan.
Mr Pence oo shir jaraa’id talaadadi ku qabtay aqalka cad ee Mareykanka wuxuu sheegay Injineerrada ciidamada ka tirsan iney diyaariyaan isbitaallo guurguuro si ay gacan uga geystaan culeyska soo fuuli kara isbitaallada gobollada.
Madaxa Pentagon Mark Esper wxuu sheegay ciidamada Mareykanka iney diyaarinayaan 5,000,000 oo cufaafta neefsiga iyo qalabka neefsiga ayna ku wareejinayaan wasaaradda caafimaadka.
Wuxuu sida oo kale sheegay ciidamadu iney furayaan 14 sheybaar oo casri ah oo cudurka looga baaro shacabka rayadka ah.
Previous articleAkhriso Nuxurka Qodobo ka soo baxay Shirkii Sama Talis ee magaalada Burco
Next articleTaliyihii sirdoonka Gobolka Sool oo aas qaran loogu sammeeyay Laascaanood